वाइड बडी प्रकरण : सरकारले बनाएको आयोग नै बेखबर ! - वाइड बडी प्रकरण : सरकारले बनाएको आयोग नै बेखबर !
२०७५, ५ फाल्गुन, 09:40:37 AM
काठमाडौं । पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग बनाएर वाइड बडी घोटालाको अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सहितको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।
विमान खरिद सम्बन्धमा उठेका विषयमा छानबिन गरेर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त्यतिबेला जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भएको मितिले आयोग बनाएको आइतबार आज ४६ दिन पुग्यो । यो अवधिकमा आयोगले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु त परको कुरा, सदस्यहरुाई जिम्मेवारी समेत दिएको छैन । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
वाइड बडी जाँचबुझ गर्न टोली बनाउदै ओली, होला त तत्यसत्य छानविन ?
विवादकाबीच वाइड बडी जहाजले दैनिक १६ घण्टा उडान भर्ने तयारी
२५ अर्ब खर्च गरिएको वाइड बडी किन उडाइएन ?
वाइड बडी किनेको कागजात सरकारसँगै छैन !